Lemongrass Chinese: ọgwụ Njirimara na contraindications - Lemongrass Chinese - 2020
Mkpụrụ ọgwụ nke Chinese Schizandra, uru na nsogbu nke ọbara ọbara tomato
Schizandra Slazandra bụ nke na-eto eto ma na-arịgo osisi, nke yiri osisi vaịn n'ụdị ya, si n'ezinụlọ Schizandra. Site na aha ndi mmadu nke osisi, ihe ndia puru ichota: Chinese shizandra, magnolia vine manchurian vine or "berry with taste five". Kedu ihe bụ ọgwụ ọgwụ nke Schizandra Chinese na ma ọ bụ ihe ọ bụla contraindications iji ya, anyị ga-agwa gị na nkọwa.
Njirimara bara uru nke Schizandra Chinese
Alaka na akwukwo
Esi kwadebe Chinese lemongrass
Ịgwọ ọrịa nke schizandra mgbe eji osisi
Ụzọ iji mee ka lemongrass
Esi esi na Schizandra zoo ma chekwaa ihe ọṅụṅụ
Ntụziaka maka ime infusions nke tomato na osisi
Mmetụta na contraindications, mmetụta ndị dị na Chinese Schizandra
Okooko, ihe odide na epupụta nke Shizandra (ma ọ bụ Schisandra Chinensis) nwere isi ihe mara mma, na-echeta isi ísì mmiri lemon. Osisi a na-adọta ụmụ ahụhụ na ísì ya, ya mere a na-emetọ ya ngwa ngwa (na-emekarị na May). Mgbe ahụ, ọ na-enweta ngwa ngwa na ụdị uhie uhie. Lemongrass mkpụrụ dị nro, nwere akpụkpọ anụ, anụ ahụ dị nro na uto uto.. Lemongrass mkpụrụ bụ ọgaranya organic asịd, vitamin A, C, E na abụba asịd dị ka linoleic, oleic na ndị ọzọ. Ọzọkwa, tomato jupụtara na ígwè, zinc, magnesium na selenium.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị nwere agba na tannins, bioflavonoids, saponins, becti pectin, na mmanụ dị mkpa. Ụfọdụ tomato nwere shuga.
Chinese lemongrass bụ n'ime osisi 10 kasị baa uru n'ụwa na ọgwụ ọgwụ.
Ị ma? Na China, ndị dọkịta na-eji ihe karịrị afọ 2000 eme ihe ọ bụghị naanị mkpụrụ osisi, kamakwa alaka, akwụkwọ, ogbugbo, mgbọrọgwụ, na okooko osisi lemongrass iji na-agwọ ọrịa dị iche iche.
Kedu ihe bara uru Chinese lemongrass? N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke uru bara uru nke osisi a.
Lemongrass na-enyere aka na ịda mbà n'obi na nchekasị, na-emetụta n'ụzọ uche dị na uche na ọnọdụ anụ ahụ nke onye ahụ. O nwere mmetụta dị mma n'ahụ ahụ nwoke, mee ka ọnọdụ mmadụ ahụ dịkwuo mma ma na-enye gị ụgwọ maka obi ụtọ maka ụbọchị dum. Lemongrass bụ ihe na-akpali akpali nke usoro nhụjuanya bụ isi, ya mere a na-ejikarị ya dị ka tonic. Dịka ọmụmaatụ, na mba ndị dị n'ebe ọwụwa anyanwụ, a na-eji mkpụrụ osisi shizandra eme ihe dị elu na-arụ ọrụ n'izu.
O nwere ihe na-enye ume ọhụrụ, nke siri ike na nke na-akpali akpali, karịsịa nke a pụrụ ịhụ anya mgbe ụbụrụ ụbụrụ siri ike, nke chọrọ ọtụtụ ume, itinye uche, na mkpebi ọsọ ọsọ. Ana eji osisi Magnolia osisi mee ihe dika ọgwụ. Ha nwere ike ịkwụsị ike ọgwụgwụ, ụra, ịlụ ọgụ na ọnọdụ ọjọọ. Shizandra na-eme ka ọrụ ụbụrụ ụbụrụ dịkwuo mma. Mkpụrụ osisi nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ndị na-emepụta ọgwụ dị nro, nke dị mkpa maka nghọta doro anya, na-enye aka na-eme ka mmegharị ngwa ngwa na ọnọdụ nke mmepụta ahụ. Ọzọkwa, a na-emepụta osisi a iji meziwanye ahụike uche.
A na-anọgide na-edozi ahụmịm ahụ n'ahụ n'ihi ahụ dị mma nke osisi ahụ na gland adrenal. N'ihu nke phytoestrogen, tomato na-alụso ọrịa nkwonkwo tupu oge eruo na ụmụ nwanyị, nakwa dịka mgbaàmà na-adịghị mma nke ndị na-eme mpụ.
Ha nwere mmetụta bara uru n'ahụ ahụ ike. Mkpụrụ ọgwụ ndị nwere lemongrass na-echebe anụ ahụ obi na-eweghachitekwa mgbe ị nwụsịrị ọgwụ ọjọọ, dịka ọmụmaatụ, n'oge chemotherapy. Ihe mejupụtara nke lemongrass gụnyere nnukwu ego nke antioxidants nke na-enye gị ohere ịgwọ ọrịa obi ụdị ọ bụla.
A na-arụ ọrụ nke imeju nke ọma ma ọ bụrụ na mmadụ na-aṅụ ọgwụ ndị dabeere na lemongrass. A na-emezi mkpụrụ ndụ nke imeju ka ọ dị mma, dị ka shizandra na-echebe ha site na nsị dị iche iche.
Ma n'ikpeazụ, ihe onwunwe ikpeazụ bara uru nke Schizandra Chinese bụ mmetụta nke akụrụngwa na-emepụta abụba, bụ nke dị na mkpụrụ nke osisi ahụ. Ihe iri anọ na anọ, bụ ndị na-eme ka ndị hepatocytes dịghachi, na-emetụta ọrụ nke imeju. Ha na-echebekwa megide mmebi na-emerụ ahụ nke ọgwụ ụfọdụ, yana mmanya na ihe mgbaze, nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ị ma? Dabere na schizandra, e mepụtara ọgwụ "Shizadrin S", nke na-egbochi ịba ọcha n'anya ma nyela aka na ọgwụgwọ nke narị ndị ọrịa ise.
Nakwa nke lemongrass na-egbochi mgbasa nke ọrịa cancer. Ma n'oge ahụ, ndị dọkịta na-achọ ikwenye na a gaghị eji yazandru mee ihe n'ịgwọ ọrịa kansa, ebe ọ bụ na a mebeghị nchọpụta miri emi.
Ndị ọzọ bara uru Njirimara nke lemongrass gụnyere:
na-enye gị ohere iwepu ụkwara ogologo, ụkwara ume ọkụ na oyi baa;
ọ nwere ike izere nsogbu nke ọrịa shuga;
mmetụta dị mma na ọbara;
na-ebute mgbochi nke anya ike;
eji mee nri;
akwalite ọrịa nke ọnya akpụkpọ anụ;
atụ aro ka a na-ahụ maka nsọtụ siri ike;
enyere gị aka ịnọgide na-eto eto ogologo oge.
Alaka na akwukwo nke Schizandra Shiazandra bara uba na mmanu bara uru, ya mere tincture nke Schisandra nwere ike iweta uru ma merie (mgbe ha na-acho oria oria oria ogwu.
Lemongrass tomato dịkwa uru n'ihi na ha nwere bekee n'ụba na mmanụ, catechin, anthocyanin. Site n'enyemaka ha, ha na-emeso ụkwara nta, bronchitis, anaemia, afọ, eriri afọ, imeju. Tea si Schizandra Shia na-enyere aka na ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche dị ka influenza, ụkwara, wdg.
Iji kwadebe osisi, ị ga-ebu ụzọ belata tomato, ebe ị na-akpachara anya ka ị ghara imebi ahịhịa ahụ ha na-etolite: n'enweghị nkwado, osisi ahụ ga-akwụsị mkpụrụ ya ma nwụọ. Na gbọmgbọm zuru oke maka ịchekwa lemongrass. I nwekwara ike iji nkata.
Ọ dị mkpa! Bọketụ galvanized nwere ike iduga n'ịze ehi nke tomato n'ihi ihe ọṅụṅụ ha.
Ụzọ abụọ e si ewe ihe ubi lemongrass:
Mkpụrụ osisi ndị a na-anakọtara, maka ụbọchị 3 ka a ghachaa ya na ndo. Mgbe ahụ, gafee ebe niile ma kewapụ ihe nkwụnye ahụ, alaka na adịghị ọcha. Mgbe nke ahụ gasịrị, a pụrụ ịkụzi tomato na oven na 60 Celsius. Mkpụrụ osisi ndị na-eme ọgwụgwọ agaghị efunahụ ha ọgwụgwọ maka afọ 2.
Ị nwere ike ịpịa lemongrass na ụlọ ọrụ hydraulic. Mgbe usoro nkwucha, a ghaghị ịsacha mkpụrụ ahụ na sieve n'okpuru mmiri jet. Mkpụrụ kwesịrị iche na nke a mịrị amị na soda. Mkpụrụ osisi ndị akpọnwụwo na 40 Celsius akpọnwụwo na 70 Celsius.
Dị ka e kwuru na mbụ, a na-eji lemongrass dịka tonic maka ịrụ ọrụ, ọrịa nke usoro ụjọ ahụ, belata ikike uche na ikike anụ ahụ. Lemongrass mkpụrụ nwere ọgwụgwọ Njirimara, na ha nwekwara ike-eji gwọọ unan, ma mpụga na esịtidem. Ọ na-enyere aka ịbawanye ike na ike n'ime ụmụ mmadụ.
A na-etinye jams, jams na juices na ha, ebe ọ bụ na tomato n'onwe ha adighi. Na ichebe lemongrass ihe ọṅụṅụ na-agbakwunyere dị ka sizinin maka syrups, compotes na jellies. Mgbe ị na-amị cucumbers ma ọ bụ tomato, a na-agbakwụnye ya na epupụta.
Ị ma? Nnukwu mmanụ dị oké ọnụ ahịa na mmanụ na ncha.
A na-ejikwa Chinese lemongrass dị ka osisi ornamental.
Enwere ụfọdụ ntụziaka sitere na Chinese Schizandra na ụzọ maka nkwadebe. A na-ejikarị eme ihe na teas na tinctures.
Iji mebie lemongrass tii, ịkwesịrị ihicha ya ma ọ bụ ogbugbo ya. Ihe dịka 15 g ga-ejupụta na mmiri ọkụ ma hapụ ya ka ọ raọ (nkeji 4). I nwekwara ike itinye epupụta nke lemongrass na tii dị mfe.
Ọ dị mkpa! Brewing tii na thermos adịghị uru, ọ ga-anapụkwa ya ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eji tii mgbe nile na Chinese lemongrass, ọ ga-eduga n'ịme ka mgbochi nsogbu na-eme ka ị na-eguzogide oyi.
Lemongrass ihe ọṅụṅụ nwere ike si na-egbute na squeezed tomato. Mgbe a na-enweta ihe ọṅụṅụ ahụ, a ghaghị ịwụsa ya na ite na pasteurized maka nkeji 15. Mgbe ahụ, akpọrọ akpa ahụ. Ihe ọṅụṅụ nwere ike imeziwanye ụda ahụ na ikike uche. A gha eji ya mee ihe na-esote: otu ngaji kwa iko tii.
I nwekwara ike ime ka mmiri ghọọ shuga. Iji mee nke a, ịkwesịrị itinye 1 n'arọ shuga ka 1 liter ihe ọṅụṅụ. A na-etinye ngwakọta na ọkụ ọkụ ma kpalie ya ruo mgbe ọ gbazere. Mgbe shuga gbasasịrị, a na-ewepụ ihe ọṅụṅụ ahụ na 90 Celsius ma wụsara ya na akpa, mgbe nke ahụ gasịrị, ọnụ mmiri ahụ gbagoro elu.
Berry tincture: 40 g nke tomato jupụtara 50% ethyl mmanya (1: 5 ruru). Mgbe nke a gasịrị, a ghagidere ngwakọta ahụ n'ime ọchịchịrị maka ụbọchị 10. Mgbe ahụ, a na-ehichasị ihe a, a na-agbakwunye ya mmanya 20 na mmanya. Akpụrụ akpụ ndị e gwakọtara na mmiri a kpụkọrọ akpụkọ. Were ya kwa ụbọchị 3 na 2.5 ml tupu nri. Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 14. Ọ na-enyere aka na nro, ehighi ụra, isi ọwụwa, ịda mbà n'obi.
Na Chinese Schisandra, ọ bụghị nanị ọgwụ ọgwụgwọ, kama ọ na-enyekwa nkọwa iji mee ihe. A ghaghi icheta na lemongrass bụ ihe na-akpali akpali nke sitere n'okike, n'ihi ya, o kwesịrị iji nlezianya mee ihe maka ọbara mgbali, obi mgbawa, epilepsy, excitability, nsogbu intracranial, ọrịa imeju na ọrịa na nnukwu ọrịa.
Ọ dị mkpa! Kwesịrị izere iji lemongrass eme ime, ndị nwere dystonia na-ekpo ọkụ na ụmụaka ndị ruru afọ iri na abụọ.
Mmetụta ndị metụtara gụnyere tachycardia, ọnụọgụ na-arịwanye elu nke afo, ehighi ụra, isi ọwụwa, allergies na ọbara mgbali elu. Iji zere ehighị ụra nke ọma, cheta na a gaghị ewere ọgwụ ọjọọ na ọkara nke abụọ nke ụbọchị ahụ. Ọgwụgwọ na lemongrass kwesịrị ime naanị n'okpuru nlekọta nke dọkịta na mgbe nyochachara.
Dị ka ị hụworo, Chinese lemongrass nwere ọ bụghị nanị na uru bara uru, kamakwa contraindications ya iji.